China GPS Tracker Model K5C စက်ရုံနှင့် ရောင်းချသူများ | Tbit
GPS ခြေရာခံ မော်ဒယ် K5C
K5C သည် သေးငယ်သော အရွယ်အစားရှိသော ကြိုးမဲ့ခြေရာခံကိရိယာဖြစ်ပြီး မည်သည့်ယာဉ်နှင့် မည်သည့်အရာများတွင်မဆို ထည့်သွင်းနိုင်သည်။
K5C တွင် 2800mAH ပါ၀င်သော တစ်ခါသုံးလီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ ၎င်း၏ဗို့အားမှာ 3.0V ဖြစ်သည်။ ဒေတာကို 24 နာရီလျှင်တစ်ကြိမ် ပို့လွှတ်ခြင်းကိစ္စတွင်၊ ၎င်းသည် သုံးနှစ်ဆက်တိုက် လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီး GPS နှင့် အခြေစိုက်စခန်းနေရာချထားခြင်း၏ တည်နေရာနှစ်ခုကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဝယ်ယူသူများအတွက် အခမဲ့ပလပ်ဖောင်းကို ပေးဆောင်ထားပြီး မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် ကွန်ပျူတာရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ပလပ်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် အခြေအနေကို စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ဒေတာကို တစ်နေ့တစ်ကြိမ် လွှဲပြောင်းခြင်း။
Built-in GPS နှင့် GSM အင်တင်နာ
Anti dismantle အချက်ပေးသံ
Polygon Geo-fence နှိုးဆော်သံ/ နှိုးဆော်သံကို ဖျက်သိမ်းခြင်း။
1. SIM ကတ်ကို ထည့်သွင်းပါ- SIM ကတ်သည် GSM ကို ပံ့ပိုးပေးရန်လိုအပ်သည်။
2. စက်ကိုဖွင့်/ပိတ်ပါ- ဘက်ထရီကိုတပ်ဆင်ပြီး ON ခလုတ်ကိုပြောင်းပြီးနောက်၊ ခြေရာခံကိရိယာသည် အလိုအလျောက်စတင်မည်ဖြစ်ပြီး ညွှန်ပြချက်မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ခလုတ်ကို OFF သို့ပြောင်းခြင်းဖြင့် ခြေရာခံကိရိယာကို ပိတ်မည်ဖြစ်ပြီး ညွှန်ပြချက် ပိတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
3. နှိုးစက်ဖျက်သိမ်းခြင်းကိုဖွင့်သောအခါ၊ ခြေရာခံကိရိယာပေါ်ရှိအလင်းအာရုံခံပြတင်းပေါက်သည် အလင်းရောင်ကိုမြင်ပြီးသည်နှင့် (အမှောင်မှအလင်းသို့) ခြေရာခံကိရိယာ၏ပါဝါကိုချက်ချင်းဖွင့်ပါမည်။ ခြေရာခံကိရိယာသည်5မိနစ်ကြာစတင်မည်ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်ထံသို့ ဖယ်ရှားရန် အချက်ပေးစာတိုကို ပေးပို့ပါမည်။
SIMCARD → ထည့်သွင်းခြင်း → ပါဝါဖွင့်ခြင်း → အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း → အကောင့်ဝင်ခြင်း → လုပ်ဆောင်ခြင်း (အက်ပ် သို့မဟုတ် ဝဘ်အားဖြင့်)
Cold Start 35S၊ Hot Start 2S
ယခင်- တရုတ် ပေးသွင်းသူ Vbox Positioner - RFID RD-100C - Tbit
နောက်တစ်ခု: GPS ခြေရာခံ မော်ဒယ် NB-100
လက်ရှိ Gps ဂြိုလ်တု အနေအထားများ
Gps Global Positioning စနစ်
Gps ဂြိုလ်တု အနေအထားများ
GPS ခြေရာခံ မော်ဒယ် W1
GPS ခြေရာခံ မော်ဒယ် OBD
GPS ခြေရာခံ မော်ဒယ် WD-108
GPS ခြေရာခံ မော်ဒယ် WA-100
GPS ခြေရာခံ မော်ဒယ် NB-100